गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा. पौडेल अख्तियारको फन्दामा - Health Today Nepal
गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा. पौडेल अख्तियारको फन्दामा
December 3rd, 2018 समाचार0comments
काठमाडौ : गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रमुख डा. तारानाथ पौडेल घुससहित अख्तियारको फन्दामा परेका छन् ।आइतबार दिउँसो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले १ लाख रुपैयाँ घुस लिँदालिँदै डा. पौडेललाई पोखराबाट पक्राउ गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालका अनुसार उनले अहेबको अन्तरवार्तामा पास गराइदिने भन्दै केही युवायुवतीबाट घुस रकम माग गरेका थिए । यो कुरा बाहिर आएपछि केही युवाले अख्तियारलाई खवर गरेका थिए । खवर पाएपछि अख्तियारले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
डा. पौडेल गत वर्ष केही समयका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागको निमित्त महानिर्देशक समेत भएका थिए । उनलाई पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहोराले आर्थिक चलखेलका आधारमा निमित्त महानिर्देशक बनाएका थिए । पछि तत्कालिन निमित्त महानिर्देशक अदालत गएपछि उनले पद छोड्नु परेको थियो ।
Previous article स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माए एक किलो घिउ
Next article एचआईभीमा आफु खुशी रिसर्च गर्न एनजिओ र आईएनजिओलाई रोक